Guddoomiyaha degmada Waabari oo xaflad dhiira gellin ah u sameysay ciyaaryahanadii kusoo guuleystay tartanka degmooyinka +SAWIRRO – Gool FM
Guddoomiyaha degmada Waabari oo xaflad dhiira gellin ah u sameysay ciyaaryahanadii kusoo guuleystay tartanka degmooyinka +SAWIRRO
(Muqdisho) 12 Sebt 2017.Degmada Waabari ayaa xaflad si heer sare loo soo aggaasimay ugu dabaal degtay hanashada koobka degmooyinka kaasoo dhawaan lagu soo gaba gabeeyay garoonka Banaadir.
Xafladaan oo ka dhacay Taaladda Dhagax Tuur ee degmada Waabari ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay qeyb ka yihiin Xilidhibaan Dalxa, masuuliyiin ka socota maamulka gobolka Banaadir, La taliyaasha madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir.
Masuuliyiintii goobta ka hadashay ayaa si isugu mid ah ugu amaanay heerka Isboortiga degmada Wabari ay taagan tahay, iyagoo dhanka kale u mahad celiyay guddoomiyaha degmada Rowda C/laahi oo xafladaan u qabatay ciyaartooyda.
Gaba gabada xaflada ayaa shahaado sharaf waxaa la guddoonsiiyay ciyaartooyda degmada,taasoo ay ku muteysteen dadaalkii dheeree ay ku qaadeen koobka degmooyinka.
Sikastaba Waabari ayaa 3-1 ugu badisay degmada Hodan, ciyaartii kama dambeysta ee tartanka degmooyinka gobolka Banaadir.
“Cristiano Ronaldo sanadkan uma qalmo Ballon d’Or.”. Filipe Luis
Juventus oo ay xiddigo Muhiim ah ka maqan yihiin kulanka caawa ee Barcelona